ကားတိုင်ထက်ကသခင့်စကား (ရ)ခွန်း | Calvary Burmese Church
July 25, 2011 April 7, 2015 / Peter Lwin
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀တုံးက မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တစ်ခုမှာပါရှိတဲ့ ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းတစ်ခုကို လွန်စွာ သဘောကျခဲ့ဘူးတယ်။ ကာတွန်းထဲမှာ သေခါနီး အဖိုးအိုတစ်ဦးက သား၊ သမီး မြေး၊ မြစ်များကို “အဖိုးလည်း ရုပ်ရှင်တွေထဲလို မသေခင် စကားတွေအများကြီးမှာထားခဲ့ချင်တယ်” ဟု မျက်နှာ ပြောင်ပြောင် ပြောနေပုံကို ဆွဲထားရာ သေခါနီး စကားပြောဒါတောင် ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားမင်းသမီးတွေလို လုပ်ပြချင်ရသေးတယ်ဟု စဉ်းစားမိပြီး ရယ်မောခဲ့ရတယ်။ လူတွေကို ရယ်မောရလေအောင် ဟာသမြောက်စွာ ရေးဆွဲထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ သေခါနီးလူတစ်ယောက်ဟာ အင်မတန်လေးနက်တဲ့ စကားတွေကိုပြောလေ့ရှိပြီး သေခါနီးလူတစ်ယောက်ပြောခဲ့တဲ့စကား ကို ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ လူတွေက အရေးတယူထားလေ့ရှိပြီး လွယ်လွယ်နဲ့မေ့ပျောက်လေ့ မရှိဘူးဆိုဒါကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရင်းနှီးသူ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် သူ့မိခင် မဆုံးခင်လေးမှာ မိခင်ကသူ့ရဲ့လက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားပြီး “ဘယ်ဘ၀ ဘယ်အခြေအနေဘဲ ရောက်ရောက် မင်းရဲ့အကို (ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူ) ကို ပစ်မထားပါနဲ့” ဟု မှာထားခဲ့တယ်။ သေခါနီး မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံး စကားကို သူ့ခမျာ ဘယ်လိုမှမေ့လို့ မရပါဘူး။ ယနေ့ထိတိုင်အောင် သူကိုယ်တိုင် ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှား နေရပေမယ့် အကိုဖြစ်သူကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဖေးမပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မကြာခင် အသေသတ်ခြင်းကို ခံရတော့မယ့် သခင်ယေရှုဟာလည်း လက်ဖ၀ါး ခြေဖ၀ါးတွေကို သံမှိုနဲ့ ရိုက်အပြီး၊ သက်တော်မထွက်ခင်အထိ နောက်ဆုံး အချိန်လေးမှာ နောက်ဆုံးသောစကား (၇) ခွန်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ သည် သခင့်နောက်ဆုံးစကား (၇)ခွန်း ဟာလည်း ရာစုနှစ်ပေါင်းမြောက်များ ကုန်လွန်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် ယနေ့တိုင်အောင် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တိုင်းရဲ့ နားထဲမှာ ကြားယောင်နေကြဆဲပါ။ အဲဒီ သခင့်နောက်ဆုံးစကား (၇)ခွန်း က ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ဘ၀အတွက် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်တွေကိုဆောင်နေသလဲဆိုဒါကို မီးမောင်းထိုး လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
အိုအဘ၊ သူ့တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပြုသောအမှုကို မသိကြ.. (ရှင်လုကာ ၂၃း၃၄)။
ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သံမှိုနှင့် ရိုက်ပြီး ပထမဦးဆုံးပြောသော စကားတော်(သို့) ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် ဘယ်သူ့အတွက် ဆုတောင်းပေးပါသနည်း။ သူ့ကို သတ်ဖြတ်သော ရောမစစ်သားများလား၊ ယဇ်ပုယောဟိတ် များအတွက်လား သို့တည်းမဟုတ် သူ့ကို သတ်ပါ၊ သတ်ပါ ဟု ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီး တရားစီရင်ချိန်တွင် အော်ဟစ်နေသော လူအုပ်ကြီးအတွက်လား။ ကိုယ်တော်တောင်းသော ဆုတောင်းခြင်းတွင် “သူတို့သည် ကိုယ်ပြုသော အမှုကို မသိကြ” ဟုဆိုသဖြင့် “သူတို့” သည်မည်သူတို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ များသောအားဖြင့် ဤ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်သူတိုင်း “သူတို့” သည် ရောမစစ်သားများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ နှင့် ကိုယ်တော့်ကို သတ်ရန် အော်ဟစ်တောင်းဆိုနေကြသောသူများကို ဆိုလိုသည်ဟု စိတ်တွင် ထင်ကြသည်။ သို့သော် “သူတို့” သည် ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသည်ထက် ပိုမို ကျယ်ဝန်းသည်ဟု ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆိုပါသည်။
ကိုယ်တော်ကို ကားတိုင်တင်ချိန်တွင် အနီးအနားတွင် ရောမစစ်သားများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများ၊ ကိုယ်တော့်ကို သတ်ရန်အော်ဟစ်တောင်းဆိုခဲ့သူများအပြင်၊ သခင်ယေရှု၏မိခင် မာရိ၊ တမန်တော် ယောဟန်၊ ယုံကြည်သူတပည့်တော် အချို့တို့အပြင် အရိမဿဲမြို့သား ယောသပ်နှင့် အချို့သမိုင်းလေ့လာသူ ပညာရှင်များက ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ် နိကောဒင် လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ဟုဆိုသည်။ ဤသူတို့သည် ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ “ကိုယ်ပြုသောအမှုကို မသိကြ” ဟုဆိုရာတွင် ရောမစစ်သားများသည် သူတို့လုပ်သော အပြစ်ကို သူတို့မသိကြ ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်နိုင် သလို၊ နောက်လိုက်တပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော့်ဖက်မှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မရပ်တည်ဘဲ၊ မိမိရင်ဆိုင် နိုင်ချေရှိသည့် အန္တရယ်ကို ရှောင်ကွင်းသည့် အနေဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ စောင့်ကြည့်နေခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တော့ ကိုယ်တော်သည် လူသားအားလုံးအတွက် အသေခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော် အသတ်ခံရခြင်း၏ အဓိကတရားခံ မှာလည်း လူသားအားလုံးတို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်ပြောသော “သူတို့” သည် ရောမစစ်သားများနှင့် ယဇ်ပုယောဟိတ် များသာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အားလုံး ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ အားလုံးသည် မိမိ ဘာလုပ်မှန်းမသိလျက်ပင် နေ့စဉ် အပြစ်များကို ကျူးလွန်နေကြပါသည်။ ထိုအပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ထက်မှ သခင်ယေရှု ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်တော်၏ ဤဆုတောင်းချက်ကြောင့် ကိုယ်တော် ကားတိုင်ထက်တွင် အသတ်ခံရပြီး (၇) ပတ်မြောက် ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် လူထောင်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင်အောင် မိမိ၏အပြစ်အတွက် နောင်တရလျက် ခွင့်လွတ်ခြင်း ကိုတောင်းခံသူ လူသားများစွာတို့၏ အပြစ်များကို ဘုရားသခင်သည် ခွင့်လွတ်တော်မူသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မသိဘဲလျက်ပြုမိသော အပြစ်များအတွက် သခင်ယေရှု က ခွင့်လွတ်ခြင်း ရရန် ကားတိုင်ထက်တွင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည် (ရှင်လုကာ ၂၃း၄၃)
ကိုယ်တော်နှင့် အတူ ကားစင်တင် ခြင်းခံရသော လူဆိုး နှစ်ယောက် အနက် နောင်တ ရသော သူ တစ်ယောက်အားပြောသော ကိုယ်တော်၏ စကားတော်ဖြစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တော်ပြောသော ဒုတိယ စကားဖြစ်သည်။ ဤစကားတော်အရ လူဆိုး နှစ်ယောက်အနက် တစ်ယောက်သောသူက ကိုယ်တော်အား ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်သော်လည်း အခြားတစ်ယောက်က ကိုယ်တော်သည် အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှပြုလုပ်သူ မဟုတ်ကြောင်းပြော ကာ၊ ကိုယ်တော်သည် နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်ကို အောက်မေ့တော်မူပါ ဟု ယေရှုကိုလျှောက်ဆိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယုံကြည်သောကြောင့်၊ တနည်းအားဖြင့် လက်ခံသောကြောင့် “နိုင်ငံတော်တည်လျက် ကြွလာတော်မူသောအခါ ” ဟု သူ၏ နှုတ်မှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤလူဆိုးအား ပရဒိသုဘုံတွင် ယနေ့ရှိမည်ဟု ကတိပေးထားပါသည်။
ဤ ဒုတိယစကားတော် အားဖြင့် ပရဒိသုဘုံ သို့ရောက်ရန်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရန် အတွက် ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (နှစ်ခြင်းခံခြင်း၊ ပွဲတော်ယူခြင်း၊ အလှူငွေပေးခြင်း၊ ကောင်းသော အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း) နှင့် အသင်းတော်တစ်ပါးပါးတွင် စိတ်အားထက်သန်စွာ ၀င်ရောက်ပါဝင်ခြင်း တို့နှင့် မဆိုင်ပါ ဆိုသည့် အချက်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤ ဒုတိယစကားတော်အားဖြင့် နားလည်ရသည့် အခြားအချက်တစ်ချက်မှာ မည်မျှကြီးမားသော အပြစ်ပင်ဖြစ်ပါစေ ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန်ဟန့်တားနိုင်ခြင်းမရှိ ဆိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုသော် လူ့ဘ၀ကို မိမိကြိုက်သလို နေပါ ကယ်တင်ခြင်း ရနိုင်ပါသည် ဟု အရမ်းကာရော ကယ်တင်ခြင်းကို ဇွတ်ပေးနေခြင်း သဘောမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ အသက်တာ၏ နောက်ဆုံးသော အချိန်ကျမှ နောင်တရသူ ဖြစ်လျှင် လည်း ကိုယ်တော်သည် နားလည်မှုကြီးစွာဖြင့် ခွင့်လွှတ်နေ မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း မျှသာဖြစ်သည်။ ဘ၀ကို မိမိစိတ်ကြိုက်နေမည် သေခါနီးမှ နောင်တရမည် ဟု ကြိုတင် စီစဉ်လှုပ်ရှားသူသည် စစ်မှန်သောနောင်တရသူ မဟုတ်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရန်လည်း မသေချာပါ။
အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကိုကြည့်ပါ ……. သင်၏အမိကိုကြည့်ပါ (ယော ၁၉း ၁၆-၂၇)
ကိုယ်တော်၏ ဒုတိယစကားတော်သည် အပြစ်သားတစ်ယောက် အပေါ်ကယ်တင်ခြင်းတရားရရှိနိုင်ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာသိစေကာ၊ တတိယမြောက် သောစကားသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ စိတ်ပညာရှင် တစ်ယောက်က “လူသားများရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးသော နှလုံးသားထဲမှ အဓိက အတောင့်တဆုံး အရာဟာ ချစ်ခြင်း နဲ့ ပါဝါ (တန်ခိုး)ဖြစ်တယ်” ဟု ဆိုခဲ့ဘူးသည်။ ယုံကြည်သူ တိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ တောင်းတ တဲ့အရာဟာလဲ ခရစ်တော် ကားတိုင် ထက်မှာပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဖြစ်တယ်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။(ယော ၃း၁၆)။
ကျမ်းစာထဲမှာ သခင်ခရစ်တော်နဲ့ မယ်တော်မာရိ တို့ရဲ့သားအမိ ဆက်ဆံရေးကို အနည်းငယ်မျှသာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် မယ်တော်မာရိ ဟာ သားဖြစ်သူ ရဲ့အဖြစ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အချိန်မှာ နှလုံးသည်းခြေကွဲလုမတတ်ခံစားနေမှာပါ။ ကျမ်းစာရဲ့ အဆိုအရ တမန်တော် ရှင်ယောဟန်ဟာ မယ်တော်မာရိ နဲ့အတူ ရှိနေတယ်လိုသိရပါတယ်။ ကိုယ်တော်က မယ်တော်အား “အချင်းမိန်းမ” ဟု သုံးနှုံးထားခြင်းမှာ မိခင် နှင့် သား တစ်ယောက်တို့၏ ဆက်ဆံရေးထက် သူထမ်းဆောင်ရသော လူသားတစ်ရပ်လုံး၏ အပြစ်ကိုဆေးကြောမည့် ဘုရားသခင်၏သားတော်၏ နေရာမှ မိန့်တော်မူခြင်းကြောင့် ဖြစ်မည်ဟု ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆိုသည်။ မယ်တော်အပေါ် ထားရှိသော သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထင်ဟပ် သလို ကျွန်တော်တို့သည် လည်း တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိရန် မှာထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှု တွင် အခြားသော ညီအစ်ကို များရှိကြောင်း ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း မယ်တော်အား အဘယ့်ကြောင့် ရှင်ယောဟန် က ဆက်လက်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန် မှာထားခဲ့သနည်း ဆိုသည် မေးခွန်းမူကား ယနေ့တိုင်အောင် အဖြေရှာမရသည့် ပဟေဠိ အဖြစ် ရှိနေသည်။
အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်ုး (မဿဲ ၂၇း၄၆)။
(၂ ကော ၅း၂၁) တွင် အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ခရစ်တော်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်သူ ဖြစ်ပေမယ့် လူသားအားလုံးရဲ့ အပြစ်တွေကို ယူတင်ပြီး အပြစ်ရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံးရဲ့ အပြစ်လို့ ဆိုတဲ့ အခါမှာ အမိဝမ်းတွင်းမှ မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ အပြစ်တွေဖြစ်တယ်၊ အင်မတန်များပြီး ကြီးလေးပါတယ်။ အဲဒီ အပြစ်တွေ အားလုံး ကိုယ်တော့် အပေါ် ယူတင်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်တော်ဟာ အပြစ်မရှိပေမယ့် အပြစ်အားလုံး စုစည်းရာနေရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအပြစ်တွေဟာ များလွန်း၊ ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက် အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သူ ကိုယ်တော့် ကို အဖ ဘုရားသခင်က စွန့်ခွါသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော် ခမျာလည်း ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ များရဲ့ နာကြင်မှု အပြင်၊ အဖ ခမည်းတော်ရဲ့ စွန်ပစ်ခြင်း ကို ခံစားရတဲ့အတွက် “အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်ုး” ဟု နာကြင်စွာ အော်ဟစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
မိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်း များ၊ သူငယ်ချင်းများကြားမှာ မတရားလွန်ကဲစွာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တစ်ယောက်ယောက် ရှိခဲ့လျှင် အတိတ်ကာလတွေမှာ ဘယ်လောက်ဘဲ ခင်မင်ခဲ့ကြရင်လည်း ရှောင်ဖယ်ရှောင်လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ဥပမာ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ ခိုးမှု စတဲ့ လူရွံရှာတဲ့ အမှုကြီးတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျူးလွန်နေရင် မိတ်ဆွေ ထိုသူနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်လက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နိုင်ပါမည်လား။ စဉ်းစားချင့်ချိန်ရပေမည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သွားသော ကိုယ်တော်၊ လူသားအားလုံး၏ အပြစ်များအားလုံး စုစည်းရာ ကိုယ်တော့်ကို ဖခမည်းတော်က ယာယီစွန့်ခွါသွားခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်က ဘယ်လိုရေးသားခဲ့ဘူးသလဲဆိုတော့ – “အပြစ်များကိုသယ်ဆောင်သွားတဲ့ ကိုယ်တော့်ကို အပြစ်များလွန်းလို့ သူ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ နေမင်းကြိးကတောင် မမြင်ရက်ဘဲ ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုးပြုခဲ့တယ်၊ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ မဟာပထ၀ီမြေကြိးကလည်း ဒေါသတကြီး အော်ဟစ် လှုပ်ရှားသွားတယ်” လို့ ကိုယ်တော် အသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံးမှောင်အတိကျ သွားခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းများကို ရေးသားခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် မိတ်ဆွေ ကိုယ်တော်ရဲ့ စတုထ္ထ မြောက်သော စကားတော်အားဖြင့် ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ အမိဝမ်းထဲမှ မွေးစဉ်ကပင် ပါရှိပြီးဖြစ်သော အပြစ်များအားလုံး ခရစ်တော်က ယူဆောင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။
ရေငတ်သည် (ယော ၁၉း၂၈)
(ယော ၁၉း၂၈-၂၉) တွင် “ထိုနောက် ကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းငှါ အမှုရှိသမျှ ကုန်စင်ပြီးသည်ကို သိတော်မူလျှင်၊ ရေငတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ ပုံးရည်နှင့်ပြည့်သော အိုးတလုံးရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည် ရေမှိုတထွေးကို ပုံးရည်နှင့် ပြည့်စေပြီးလျှင်၊ ဟုဿုပ်ပင်အကိုင်းဖျား၌ တပ်၍ခံတွင်းတော်သို့ ကပ်ထားကြ၏” ဟု ဆိုထားပါတယ်။
ကိုယ်တော် ဟာ လူသားအားလုံးရဲ့ အပြစ်များကို ယူဆောင်ပြီးသွားခြင်း၊ လူသားအားလုံး၏ အပြစ်များကို သန့်စင်ပေးခြင်းတည်း ဟူသော သူပြုလုပ်ရမည့် အမှု ရှိသမျှ ပြီးပြီ ဆိုဒါကို သိတော်မူတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျမ်းစာ (ဓမ္မဟောင်း) ထဲမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်ခန့်က ရေးသားထားခဲ့တဲ့ အရာများးပြည့်စုံစေဖို့အတွက် “ရေငတ်သည်” ဟု မြည်တမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ထဲက (ဆာလံ ၂၂း၁၄-၁၅) မှာ “အကျွန်ုပ်သည် ရေကဲ့သို့ သွန်ခြင်းကိုခံရ၍ အရိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့သည် ပြုတ်ကြပါ၏၊၊ အကျွန်ုပ်နှလုံးသည် ဖယောင်းကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ရင်ထဲမှာ အရည်ကျိုလျက် ရှိပါ၏၊၊ အကျွန်ုပ်ခွန်အားသည် အိုးခြမ်းကဲ့သို့ ခန်းခြောက်၍ လျှာလည်း ပါးရိုး၌ ကပ်လျက်ရှိပါ၏၊၊ အကျွန်ုပ်ကို သေမြေတိုင်အောင် ချတော်မူပါပြီ” ဟူ၍ ၄င်း –
(ဆာလံ ၆၉း ၂၁) မှာ “အကျွန်ုပ်စားစရာဘို့ ဆေးခါးကိုကျွေးကြပါ၏၊၊ ရေငတ်သောအခါ ပုံးရည်ကိုတိုက်ကြပါ၏၊၊” ဟူ၍၄င်း ဗျာဒိတ်ပြုထားခဲ့သည်များ ပြီးပြည့်စုံခြင်း ရောက်ဖို့ ကိုယ်တော်က “ရေငတ်သည်” ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ ပဉ္စမမြောက်သော စကားတော်အားဖြင့် သိရှိရသည့် နောက် အချက်တစ်ချက်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူသားများအတွက် ကိုယ်တော်ခံစားရသော နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ (Suffering) ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကိုယ်တော် ထမ်းခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အတွက် ယုံကြည်ခြင်းရှိရုံနဲ့ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်တော် ကတော့ အဖိုးအခ ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ မိတ်ဆွေအတွက် ကိုယ်တော် နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာ (suffering) ကို ကားတိုင်ထက်မှာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
အမှုပြီးပြီ (ယော ၁၉း၃၀)
ဆဌမမြောက် ကိုယ်တော်ပြောတဲ့ စကားကတော့ “အမှုပြီးပြီ” (It is finished) ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ပြုလုပ်ရမယ့် တာဝန်၊ အမှုအားလုံးအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အမှုပြီးပြီ လို့ ကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃း၁၅ မှာ “သင်နှင့် မိန်းမ ကို၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအနွှယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုးအနွှယ်ကို၎င်း ငါသည် ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်၊ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အာဒံ နဲ့ ဧ၀ တို့ရဲ့ ဘုရားစကားကို နားမထောင် မှုကြောင့် လူသား နဲ့ စာတန် ကြားမှာ အမုန်းတရားဆိုတဲ့ စစ်ပွဲ၊ ရန်ညိုး ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီရန်ညိုးကြောင့် ရာစုနှစ် အဆက်ဆက် စာတန်ဟာ လူသားများကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။ စာတန်ရဲ့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ ရန်ကြောင့် လူသားများဟာ ကယ်တင်ခြင်း ရဖို့ လမ်းစနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးခဲ့ရပါတယ်။ အပြစ်ရဲ့ အခဟာ သေခြင်းလို့ ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ ဒီ ရန်ညိုး၊ စစ်ပွဲကို လူမိန်းမရဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်က အောင်မြင်စွာ အနိုင်ရလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိနိုင်ငံ ရဲ့ စည်းပွါးရေးလောကမှာ အကြွေးပေးစရာ အားလုံးကုန်ပြီဆိုရင် (It is finished) ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တုံးကို နှိပ်လေ့ရှိတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး၊ အကြွေးမရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “ရှင်းပြီး” လို့ တံဆိပ်နှိပ်ပေးသလိုမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ရှင်းပြီး လို့ တံဆိပ်နှိပ်ထားရင် ကျွန်တော်တို့ ထပ်ရှင်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်း ခရစ်တော် က (it is finished) လို့ တံဆိပ်တုံးနှိပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်စရာ မလိုတော့ဘူး။ မိတ်ဆွေ ဟာ ခရစ်တော်ရဲ့ (it is finished) လို့ တံဆိပ်နှိပ်ထားခြင်း ခံရသူဖြစ်တယ် ဆိုဒါ မမေ့ကြနဲ့စို့။
အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော် လက်၌အကျွန်ုပ် အပ်ပါ၏ (လု ၂၃း၄၆)
ကိုယ်တော်ရဲ့ နောက်ဆုံးသော စကားဖြစ်ပါတယ်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် အစပြုပြိး နောက်ဆုံးတွင် သူ၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို အဖခမည်းတော် လက်သို့ အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ (ယော ၁၀း၁၈) တွင် “ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါစွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရ သောအခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။ ထိုအခွင့်ကို ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။” ဟု ဆိုသကဲ့သို့ သူ့၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို အဖ ခမည်းတော်လက်သို့ အပ်နှံခြင်းဖြစ်တယ်။ ဤ စကားအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် သေခြင်း၏ နောက်တဖက်ရှိ ထာဝရ ခမည်းတော်၏ စံအိမ်သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်ကို သိရှိရသည်။ (ဆာလံ ၃၁း၅) “သစ္စာစောင့်တော်မူသော ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော်လက်၌ အပ်ပါ၏၊၊” တွင် ရေးသားခဲ့သည့် အတိုင်း ပြည့်စုံစေရန် အတွက် သခင်ယေရှု က မြွက်ဆိုခြင်း လည်းဖြစ်ပေမည်။
ချုပ်၍ဆိုရသော် ကားတိုင်ထက်မှ ကိုယ်တော်မြွက်ဆိုခဲ့သော စကားတော်များသည် ကျွန်တော်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း သွန်သင်လမ်းပြပေးနေပါသည်
အိုအဘ၊ သူ့တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ – ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရား
ယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူ ပရဒိသုဘုံ၌ ရှိလိမ့်မည် – ကယ်တင်ခြင်းတရား
အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကိုကြည့်ပါ – ချစ်ခြင်းတရား
အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်ုး – မွေးရာပါအပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင်ယူသွားခြင်း
ရေငတ်သည် – လူသားများအတွက် ကိုယ်တော်ဝေဒနာခံစားခြင်း
အမှုပြီးပြီ – အောင်မြင်ခြင်း
အကျွန်ုပ် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကိုယ်တော် လက်၌အကျွန်ုပ် အပ်ပါ၏ – ထာဝရလုံခြုံစိတ်ချခြင်း
စာဖတ်သူအပေါင်း ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်း နှင့် ကောင်းကြီးများစွာတို့ကို ခံစားရသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း
Seven last words on the cross, Thawngno
← Saya Thang Vella’s Sermon
Uniform by Rev. Lian Khan Kap (ZCCC) →